पोखरामा लैङ्गीक अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न | Jukson
नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई यौन आकर्षणको आधारमा लैङ्गीक पहीचानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । पुरुष महिलाको सिमा बाहीर आफ्नो अस्तित्व खोज्ने जो कोहीलाई पनि समाजमा खुलेर बाँच्न पाउने अधिकार संबिधानले दिइसकेको छ । समाजमा भने अझै पनि समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्य लैङ्गीक अल्पसंख्यकहरु अत्पिडन र घृण सहेर बाँचीरहेका छन् । यही बिषयमा पोखरामा २ दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
ग्रिन सिग्नल नेपालको आयोजनामा जेठ २८ र २९ गते लैङ्गीक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रणय टेङ्गाले प्रशिक्षण दिएकी थिइन् । बिगत २० वर्ष देखी लैङ्गीक क्षेत्रमा कार्यरत उनले वर्तमान नेपाली समाजमा लैङ्गिीक अल्पसंख्यकहरुले भोगीरहेका समस्या, समाधानका उपायहरु, विश्व समुदायमा उनिहरुको अवस्था, यौन आकर्षणको आधारमा लैङ्गीक पहिचानका प्रकारहरु आदी बिषयमा जानकारी दिएकी थिईन् । उनले लैङ्गीकअल्पसंख्यकहरु आफुले आफैलाई पिडीतको ताज पहिराएर चुपचाप बस्न नहुने बताईन । उनले भनिन ‘शिक्षाको क्षेत्रमा, आर्थीक रुपमा, राजनैतिक पहिचानको कुरामा लैङ्गीक अल्पसंख्यकहरु धेरै पछाडी छन् । उनीहरुलाई अगाडी आउन, अरु सरह बाँच्न आफै सचेत हुनुपर्छ ।’ कार्यशालामा समाज र तपाई, सामाजिक लैङ्गीकताको निमार्ण, लौङ्गीक नीति र राजनीति, बिषयमा ३ वटा सेसनहरु चलाइएका थिए । ‘हाम्रो कार्यक्रमको मुल उद्वेश्य भनेको सहभागीलाई तपाई को हो ? र तपाई के हो ? भनेर उत्तर दिन सक्ने बनाउने हो ।’ , कार्यक्रम संयोजक ले भने, ‘नेपालमा अझै पनि धेरै व्यक्तीहरु आफ्नो लैङ्गीकताको बारेमा कन्फ्युज्ड छन् । कतिलाई यस्को बारेमा थाहा पनि छैन । नेपालमा लैङ्गीकताको संवाद जरुरी देखेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौँ ।’
नायब सुब्बा पदको परीक्षाफल आयो (नतिजासहित)
हात हालाहाल गरेपछि मोरङका तीन खेलाडीलाई १८ महिनाको प्रतिबन्ध